TCN: Dib u jaleecida 2019 iyo rajada 2020 - TCN
TCN: Dib u jaleecida 2019 iyo rajada 2020
Waqtiga: 2020-01-11 Hits:
Sannad cusub ayaa imanaya
Waqtigu wuu duulayaa, mar dhowna wuxuu noqon doonaa sanad kale.
Hadda waxaan kugu martiqaadeynaa inaad dib u eegto TCN 2019
200 milyan oo qandaraasyo iskaashi istiraatiiji ah
9-kii Julaay, TCN waxay 200 milyan oo heshiis iskaashi istiraatiiji ah la saxiixatay TCN. Ka caawi macaamiisheenna inay si dhakhso leh u qabsadaan goobta, yareeyaan kharashka maalgashiga, iska ilaaliyaan halista iyo inay yeeshaan raasumaal dheeri ah!
Abuuritaanka Laanta Shanghai
Bishii Maarso, TCN Shanghai Laanta (Shanghai Jixi Intelligent Technology Co., Ltd.) ayaa la aasaasay.
Jidka lagu dadaalayo in uu noqdo "ganacsi heer caalami ah oo mishiinka wax lagu iibiyo", TCN ayaa tallaabo weyn horay u qaaday.
Cinwaanka: qolka C102, No. 1128, Jindu Road, Degmada Minhang, Shanghai
Mashiinka cuntada kulul ee caqliga badan
Bishii Ogosto, TCN "jikada caqliga badan" ayaa suuqa gashay! TCN waxay ku shubeysaa dhiig cusub suuqa cuntada waxayna u keentaa macaamiisha fursado ganacsi oo cusub.
Bartamihii Diseembar, badeecada cusub "suuq suuqeedka caqliga badan" ayaa la casriyeeyay oo la bilaabay. Waxay ku shaqaysaa noocyo kala duwan oo badeecooyin ah oo ay ku jiraan cunto cusub, miro, cabitaanno, cunto fudud, iwm.
Mashiinka iibinta MI ee TCN
Bishii Meey, Lei Jun, aasaasihii shirkadda Xiaomi, wuxuu ku soo bandhigay Hindiya "Mashiinka wax lagu iibiyo". Dadku waxay si toos ah uga iibsan karaan taleefannada gacanta ee Xiaomi iyo qalabyada mashiinka wax lagu iibiyo burka bariiska Hindiya halkii ay lacag ka heli lahaayeen. Mashiinka iibinta waxaa sameeyay TCN.
Shirka sanadlaha ah ee warshadaha mashiinka iibinta
Bishii Nofeembar 12, shirkii sanadlaha ee 2019 ee warshadaha mashiinnada iibinta oo ay martigelisay CSIM & APVA iyo TCN ayaa si guul leh loogu qabtay Sheraton Hotel, fupeng, Changsha. TCN waxay ku guuleysatay koobab badan kulankaan.
Bishii Febraayo 25, TCN, oo leh 54 nooc oo ah mashiinno si toos ah wax loogu iibiyo oo ku yaal dukaan weyn oo cusub, is-adeegsi cunto kulul, isdhexgalka goobta iyo xaalado kale oo dalab ah, ayaa ka soo muuqday nidaamka iibka is-adeegga ee Guangzhou International iyo tas-hiilaadka xarumaha!
Bishii Abriil 24, xubin xubin ka ah Ururka Mareykanka ee iibka otomaatigga ah, TCN waxaa lagu casuumay inay ka qeyb galaan Bandhigga Nama ee Mareykanka. Iyaga iyo shirkadaha caanka ah ee adduunka, waxay qabteen bandhig ay ku muujinayaan ammaanta “laga sameeyay dalka Shiinaha".
Bandhigga CVS ee Shanghai
Bishii Abriil iyo Ogosto, TCN waxay ka qayb qaadatay bandhigga 'CVS' ee Shanghai oo ay ku jiraan alaabooyin badan oo cusub oo ku jira ruux firfircoon.
2020, waa bilow cusub
Sannadkan, ereyadayada muhiimka ah waa:
Cusbooneysiin, tayo sare leh iyo jaritaan
Sannadkan, alaabtayada ugu sareysa waa:
"Jikada caqliga leh" mashiinka cuntada kulul lagu iibiyo
Sanadka 2020, hadafkeenu waa:
Sii wad sameynta mashiinada wax iibinta oo aad u awood badan
Sii wad inaad siiso waxtarro mudnaan badan
Sanadka 2019, waad ku mahadsan tahay dhammaan taageeradaada iyo jacaylkaaga
Sanadka 2020, fadlan sii wad talo bixinta ama faallooyinka badan
HORESidee loo doortaa bandhigga ganacsiga tafaariiqda ah?
NEXT BILAABKA SANADKA CUSUB